पाेखरामा आयल निगमकाे पहिलाे प्रादेशिक भण्डारण केन्द्र, के-के छन् विशेषता ?
पोखरा, २७ कार्तिक। पोखरामा नेपाल आयल निगमको पहिलो प्रादेशिक भण्डारण केन्द्रको शिलान्यास गरिएको छ। बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उक्त भण्डारणको शिलान्यास गरेका हुन्।
हरेक प्रदेशमा ९० दिनका लागि इन्धन भण्डारण क्षमताको डिपो निर्माण गर्ने घोषित नीतिअनुसार पहिलो परियोजनाको रुपमा गण्डकी प्रादेशिक डिपोको क्षमता अभिवृद्धिको रुपमा सुरु गरिएको हो। वि.सं. २०५८सालपछि निगमको आफनै लगानीमा पहिलो कामको रुपमा यो योजना अघि बढेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ।
प्रदेशमा हरेका दिन ४ लाख ६७ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुन्छ। एक दिनमा यस प्रदेशमा ३ लाख २५ हजार लिटर डिजेल र एक लाख ४२ हजार लिटर बिक्रि भइरहेको छ।
पर्याप्त भण्डारण स्थल नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेका बेला नेपाल आयल निगमले पोखरामा एक करोड लिटरको डिजेल भण्डारण स्थल निर्माण सुरु गरेको हो। निगमले ७७ करोड ७७ लाख रूपैयाँ लगानीमा भण्डारण ट्यांक निर्माण सुरु गरेको छ ।
पोखरामा अहिले पेट्रोल भण्डारण क्षमता तीन सय ५० किलोलिटर रहेको छ । १० हजार किलोलिटरको डिजेल भण्डारण स्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि अहिलेको २२ सय ८० किलोलिटरका ट्यांकलाई पेट्रोल भण्डारण गर्ने गरी कन्भर्जिङ गर्ने निगमको योजना छ । निगमसँग अहिले डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, हवाई इन्धन भण्डारण क्षमता ७१ हजार ६ सय ७४ किलोलिटर मात्र रहेको छ । सरकारले निगमलाई तीन महिनालाई पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण गर्न निर्देशन दिए पनि मुुलुकभर भण्डारण क्षमता कमजोर छ।
निगमले चालु आर्थिक वर्षमा इन्धन भण्डारण पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि अन्य ठाउँमा पनि भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए। अहिले डिपो भएका स्थान क्षमता विस्तारसँगै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निगमले जनाएको छ।
इन्धन भण्डारण टयाङ्क र यसमा जडान हुने संरचनाहरु जर्मन प्रविधिमा आधारित पूर्णस्वचालित हुने निगमले जनाएको छ। डिजेल लोड र अनलोड सुविधा पूर्णरुपमा स्वचालित र हाइटेक सुरक्षा प्रविधिामा आधारित हुने छ। डिपोमा एक नयाँ पहुँच सडक, दुई लाख लिटर क्षमताको पानी भण्डारण टयाङ्क, डिपोको चमेना गृह, चालक तथा सुरक्षाकर्मी बस्नका लागि नयाँ संरचना निर्माण गरिनेछ।
आपतकालीन अवस्था आएको खण्डमा एकै स्वीचमा सबै प्रणाली बन्द गर्न सकिने रिमोट कन्ट्रोल प्रविधिमा राखिने छ। कुनै पनि कारणले डिपोमा आगोलागी भएको खण्डमा करिब दुई घन्टासम्म निरन्तर आगो नियन्त्रणका लागि लड्ने क्षमताको पूर्वाधार डिपोमा बनाइने छ।आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तोकिएको समयअगावै आयोजना सम्पन्न हुने बताइएको छ।
सत्तरी प्रतिशत पानी र ३० प्रतिशत फोमयुक्त अग्नि नियन्त्रण उपकरणको प्रयोग गरिने छ।दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने उक्त भण्डारण गृह निर्माणका लागि आयोजनाको ठेक्का समानान्तर-रेलिगेयर-भारत ट्याङ्क्स जेभीले पाएको छ।